トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Ose ndinoiitawo [wokurarama zvikwereti chete]
chete kubva maitiro kuramba kubhadhara iri yakarurama-mutsetse hwaro wechikoro. Chakasimudzira wokurera nzira yayo mutsividzo inonzi "Maipei kuva ribonucleic". Rendi, anogona kuisa shoma mari mari kubva 5000 Yen, izvo nemari ndinoiitawo mubereko rava hurongwa iri debited.
Munyaya "Maipei kuva ribonucleic", kana shoma kubhadhara chitsama mari kana kupfuura, nemiwo unogona kubhadhara kuti aenderane zvivanakire inodzidzisa iri zvakakwana kunyange zvishomanana. Wainyatsotaura mari zvinogoneka kuburikidza kuonana Indaneti uye runhare. Uyewo, kana uine chemhosva nokuda anopfuura 5000 Yen, sezvo kwakavakirwa nemari ndinoiitawo mubereko pamusoro mari iyi mari, unogona kuderedza, kana zvichibvira akawedzera. Unogona zvakare nyore nyore seboka kubhadhara zvakakwana. 800,000 Yen kubva
wese Plus, ane kadhi kuti Sumitomo Mitsui Banking Corporation rakapa, ndiyo wokurarama zvikwereti chete kadhi. In hapana muripo pagore, unogona kubatana kunze vokusekondari kana zvizere makore 18 kana vakura. Chinhu chikuru chinoratidza kuti zvingaonekwa wabhadharwa mugamuchirwe kumhanya.
mutsividzo musi sezvo pamwedzi mazuva 26, kana uine kuti kubhadhara $ 50 sandara-zvazvingava, Somuenzaniso, kana zvinofungirwa kuti kushandiswa 50,000 Yen musi June 15, kuna July 26, unova wokutanga mutsividzo musi pasina mubereko 5000 Yen kutorwa kuti wechikoro, yava kubhadhara 5110 Yen kuwedzerazve 110 Yen kufarira inotevera mwedzi waAugust 26.
kana pane coherent mari kune chinotevera September 26, unogona kubhadhara shure nenzira kubhadhara mari kuti 675 Yen kufarira kuwedzera ndinoiitawo anopfuura 5000 Yen. Nekuti mubereko ndizvo pamwero pagore 18 muzana ari ribonucleic kufarira, sezvo kadhi kuti wokurarama zvikwereti, asi zvinoiswa yepamusorosoro, ichi yepamusoro dhigirii rusununguko muna nzira muripo kadhi havachamboshandisi, zvave dzinoongororwa panguva iyoyo.
Chaizvoizvo, kana mwedzi unotevera mazuva 10 kubhadhara pamwedzi mazuva 15 sungisa, uye ipapo sarudza inotevera mwedzi mazuva 26 mari pakupera tightening. V ISA akaita partnered pamwe, zviri iripo kwose uyewo anopfuyiwa. Rinogona kushandiswa sezvo zvemagetsi mari, unogona kushandisa Id uye WAON, sezvo visa payWave.
Internet inogona kuitwa kupedza chikumbiro, akabudisa makadhi mu pfupi zvebhizimisi mazuva matatu, muchapiwa paruoko munenge vhiki. Set of debit nhoroondo zvinogona kuisa pamambure, unogona wemasaini kumusoro nyore pasina dzichikunetsa kuti siginicha uye chisimbiso.
yave kuzivikanwa nokuda makomborero
pfungwa rutapudzo zvazvingava zviri kumusoro, gore negore muripo kadhi rava soro nenhanho rutapudzo yevanhu 1.5%. Nongedzera Ana uye Rakuten pamusika, unogona kuchinjana mashoko Amazon pfungwa uye Yahoo kunotenga pfungwa.
Bic uye Muji, unogona zvakare kuchinjana pfungwa dzakadai Nissen. 1 nguva kuwana paminiti 1,000 Yen pa kadhi kunotenga, womuratidza mwedzi iyo ribonucleic kufarira zvakaitwa ichava-mafuro matatu. Kutamisirwa hunoratidza dzimwe emisasa kadhi iri iripo. Kana
kadhi vanhu ava, uye vaya vanotenda kuti chakanaka nani zvichibvira zveefa, muripo chinhu kadhi kuti zvakakodzera vanhu vanonzi kuva kadhi zvakanaka pane mari. The mushandisi salaried vashandi chakataurwa kuti pane vazhinji, kune avo vanoita zvose muripo kadhi chakabereka refu kuongorora. Nokuti rinogona kushandiswa zvemagetsi mari, unogona kusaina havatsvaki yechipiri kugarwa panguva kurerukirwa zvitoro uye muzvitoro. Zviri zvikuru nyore kadhi. Hwava 5%. Nongedzera Ana uye Rakuten pamusika, unogona kuchinjana mashoko Amazon pfungwa uye Yahoo kunotenga pfungwa.
kadhi vanhu ava, uye vaya vanotenda kuti chakanaka nani zvichibvira zveefa, muripo chinhu kadhi kuti zvakakodzera vanhu vanonzi kuva kadhi zvakanaka pane mari. The mushandisi salaried vashandi chakataurwa kuti pane vazhinji, kune avo vanoita zvose muripo kadhi chakabereka refu kuongorora. Nokuti rinogona kushandiswa zvemagetsi mari, unogona kusaina havatsvaki yechipiri kugarwa panguva kurerukirwa zvitoro uye muzvitoro. Zviri zvikuru nyore kadhi.